New Version of SoundCloud hanatsarana ny fampiharana lamaody mozika | Androidsis
Raha tsy maintsy mitady tambajotra sosialy tena mifantoka amin'ny mozika, azoko lazaina fa ny SoundCloud no tsara indrindra hitantsika vaovao raha ny fironana mozika no resahina ary aiza no ahitantsika karazana artista sy karazana mozika. SoundCloud dia iray amin'ireo hevitra tsara indrindra noforonina tamin'ny mozika ary ananantsika amin'ny Android mandritra ny fotoana fohy izao hahafahantsika mankafy azy io amin'ny finday avo lenta.
Ao amin'ity kinova vaovao an'ny SoundCloud ity, 2.8, ny sasany fanovana kely hita maso ny interface, Hashtags ao amin'ny fikarohana na swipe hanavao ny atiny amin'ireo fisongadinan'ity tambajotra sosialy mahatalanjona ity izay miloko tsara kokoa isaky ny mandeha.
Amin'ny ankapobeny, ny fiovana dia eo amin'ny lafiny hita maso amin'ny fampiharana, na dia tsy maintsy lazaina aza fa fiovana kely izy ireo, fa amin'ny ankapobeny dia ankasitrahana ho antsika izay manana SoundCloud ho teboka fanovozan-kevitra mozika lehibe. Misy zavatra mihetsika ao amin'ity tambajotra ity tsy hita amin'ny hafa izany. Indraindray.
Ny zava-dehibe amin'ireo fanovana hita maso ireo dia banga izao ny kiheba. Nihatsara koa ny interface playlists. Raha momba ny fikarohana, ny fampiharana izao dia manohana tenifototra miaraka amin'ny pejy feno tolo-kevitra rehefa tsindrio ny kisary fikarohana.
Ny iray amin'ireo fiasa vaovao, izay efa zavatra fototra amin'ny fampiharana Android, dia ny swipe tery hidina hanavao ny pejy. Raha tsy izany dia kely fotsiny no holazaina, ankoatry ny fanamboarana bibikely izay hitantsika isaky ny fanavaozana ary antenaina fa hanatsara ny fahamarinan'ny SoundCloud izany.
SoundCloud dia lasa benchmark mozika ary miaraka amin'ny fanatsarana tsy tapaka ny fampiharana azy ho an'ny fitaovana finday, ahafahana lasa fampiharana tsy azo ihodivirana napetraka. Raha mitady Richie Hawtin set ianao, Jeff Mills na ny lohahevitra farany Herla (Ny tsy fitovian'ny namana), mandehana amin'ny widget eto ambany mba hisintona SoundCloud for Android.
SoundCloud: Mozika sy Playlists
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Kinova vaovao an'ny SoundCloud misy fiovana kely hita maso, tenifototra amin'ny karoka sy maro hafa
Google manatsara ny fiarovana Android amin'ny alàlan'ny fitiliana tsy tapaka ireo fampiharana mihazakazaka